Otutu Nhọrọ Quiz Onye kere - Olee otú Mee a otutu Nhọrọ Quiz
> Resource> Atụmatụ> Mee Multiple Nhọrọ Quiz na otutu Nhọrọ Quiz Onye kere
Online quizzes aghọwo ndị dị oké mkpa na ngwá ọrụ nkụzi na trainers tụọ ha ụmụ akwụkwọ na trainees. Na otutu oke ajụjụ (MCQ) e ọtụtụ-eji nile di iche iche nke ngwa ngwa ntule. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a multiple oke ajụjụ, Wondershare QuizCreator ga-enyere gị. Ọ bụ ihe niile-na-otu ajụjụ onye omume gụnyere 9 na-ewu ewu ajụjụ ụdị gụnyere multiple oke ajụjụ. Ma i nwere ike ime ka ọ na a multiple oke ajụjụ onye na ike-ekere òkè Flash dabeere quizzes. Ugbu a-eso ndị a n'okpuru ịmụta otú ike a multiple oke ajụjụ.
1 Mepụta a Multiple Nhọrọ ajụjụ
Na Home taabụ, pịa Ajụjụ button, họrọ Multiple Nhọrọ ke New Ajụjụ ndepụta na pịa OK dezie ajụjụ ke Ajụjụ edezi window.
2 Tinye ajụjụ na ajụjụ ederede ubi
Tinye multiple oke ajụjụ na ajụjụ ubi, na i nwere ike dezie font nke ule dị mfe dị ka iji Microsoft Office ngwá ọrụ. Ndị dị ike na-edezi atụmatụ, ị nwere ike mfe fanye oyiyi, arụmarụ, hyperlinks na ọbụna ụfọdụ ihe Atụmatụ.
E wezụga na, QuizCreator-enye media ebe n'ihi na ị na fanye oyiyi, ọdịyo na video faịlụ. Fanye audio - Ịnwere ike idekọ ụda clip, mbubata ọdịyo faịlụ ma ọ bụ ọbụna tọghata ederede ka okwu maka gị ajụjụ. Fanye video - ị nwere ike itinye ihe FLV ma ọ bụ SWF faịlụ ka ajụjụ.
3 Tinye nhọrọ na Nhọrọ ubi
Tinye nhọrọ na Nhọrọ ubi na kaa ziri ezi azịza ha na Correct kọlụm. Ị nwere ike tinye nhọrọ abụọ dịkarịa ala, na itoolu na kasị. Images, arụmarụ, hyperlinks na Akara ókwú edezi ndị dịnụ na nhọrọ.
4 Set nzaghachi maka otutu oke ajụjụ
Mgbe eke gị ajụjụ, ị kwesịrị ị na-enye ụfọdụ kenkwukorita feedbacks ka ajụjụ takers. Ị nwere ike họrọ nzaghachi ụdị si ndọpụta ndepụta na Nzaghachi ìgwè na-ahọrọ ma ọ bụghị site Ajụjụ ma ọ bụ Azịza.
Pịnye nzaghachi ozi maka ziri ezi na-ekwesịghị ịdị na nhọrọ na ajụjụ Nzaghachi ebi ndụ. Pictures, arụmarụ, na audio faịlụ nwere ike debara elu ọnọdụ.
Branching bụkwa dị na Nzaghachi ìgwè. Ị nwere ike alaka ụlọ ọrụ ajụjụ takers dị iche iche ajụjụ dabere na ha Ibọrọ aga na ajụjụ. Dị ka nzaghachi, branching nwekwara ike kpọmkwem site ajụjụ ma ọ bụ site azịza. Ọ ga-eduzi ule na-"-anọgide na, imecha ma ọ bụ gaa kpọmkwem ajụjụ".
5 Set ihe, oge ịgba na ndị ọzọ n'ihi na otutu oke ajụjụ
Iji mee ka ọ a ezigbo ule, e nwere ụfọdụ Njirimara dị ka ihe, mgbalị na oge ịgba nwere ike ịtọ ka ajụjụ. E wezụga, ị nwere ike alaka ụlọ ọrụ ajụjụ takers dị iche iche ajụjụ dabeere na ha na-ahọrọ na-aga na ajụjụ.
6 Zọpụta multiple oke ajụjụ
Mgbe ị na-rụchaa edezi a zaa ajụjụ, ị nwere ike pịa OK ịzọpụta ajụjụ ma na-emechi Ajụjụ edezi window. Ma ọ bụ i nwere ike pịa New Ajụjụ button ịzọpụta ugbu a ajụjụ na ike ọzọ Multiple Nhọrọ ajụjụ.
Ugbu a ị gụsịrị e kere eke nke a multiple oke ajụjụ. Gaa Njirimara na i nwere ike ime a otutu n'ozuzu ntọala maka gị dum ajụjụ. Iji mee ka gị multiple oke ajụjụ anya ọzọ-ekere òkè, i nwere ike bulie a siri wuru na-ajụjụ ọkpụkpọ template ma ọ bụ imewe otu site onwe gị. Mgbe ahụ ị pụrụ ebipụta a zaa ajụjụ dị ka a Flash ule aka ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ soro na-arụpụta, ị nwere ike ezipụta ụfọdụ adreesị email na-ekwusara window, ma ọ bụ i nwere ike bulite ajụjụ ka òtù LMS ma ọ bụ QuizCreator Online abịa na QuizCreator.
Olee otú Play PowerPoint Ngosi on TV
Tinye Scrapbook Clip nkà Retouch Your Scrapbookings